Store က — ခရီးစဉ်လီ
အစွန်းအထင်း Glass ကိုအင်္ကျီ
အဖြူရောင်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်, 100% polyester ဆိုးဆေးခွဲ t-ရှပ်အင်္ကျီ
ထုံးစံမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်အရွယ်အစား tag နဲ့ Tagless
ထုံးစံဓလေ့ 116 အောက်ခြေကပနျးပှားအပေါ်ချုပ်ယက်တံဆိပ်. တံဆိပ်၏နားလည်ဖတ်, “ငါအရှက်ကွဲခြင်းမဟုတ် Am”.
တက် – စာအုပ်
Society ကလူငယ်အပူအပင်ကင်းပြီး Self-စကားရပ်များအတွက်အချိန်ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခရီးစဉ် Lee ကဘုရားသခင့ငိုက်မှထလူတိုင်းကိုခေါ်ပြောပါတယ်, အနိမ့်မျှော်လင့်အထက်, နှင့်ထမြောက်တော်မူဘုရင​​်, အသက်ရှင်ရန်.
ကမ္ဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်တာဝန်မဲ့ခံစားခြင်းထက်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝရေးရာမှမြှုပ်နှံခံရဖို့ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်. ကျနော်တို့တာဝန်နှင့်ကတိကဝတ်အဖြစ်ကြာမြင့်စွာတတ်နိုင်သမျှပယ်ခံရဖို့ဝန်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်. ဆိုတော့, ကျွန်တော်ဖွင့်မရရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အများစုကဘဝအပေါ် In-အိပ်ပျော်သည်ငိုက်နေတဲ့ဝမ်းနည်းဖွယ်ပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်သုံးဖြုန်း. အဆိုပါပြဿနာဘဝပြီးသားစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအခုဖြစ်ပျက်င်. တဖန်ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်ဖို့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီ.
ဒီအစွမ်းထက်စာအုပ်ထဲတွင်, ခရီးစဉ် Lee ကကနှိုးထဖို့အချိန်ရဲ့စောဒကတက်သည်, ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရန်ဖန်တီးခဲ့ကြရာလမ်းကိုအသက်ရှင်ရန်. Young ကသို့မဟုတ်ဟောင်း, ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအသက်ရှင်ရန်ခေါ်ခဲ့ကြရတယ်. အခုပဲ. Young ကယုံကြည်သူများအဟောင်းတွေကခရစ်ယာန်တွေကဲ့သို့တူညီသောပြဿနာများရင်ဆိုင်ရ, ဒါပေမဲ့သူတို့ထူးခြားသောနည်းလမ်းများမှာသူတို့ကိုခံစားရ. ထကွတခုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွက်သူတို့အား core ကိုပြဿနာတွေအမှာစကားပြောကြား, လေးနက်, အသက်ရှင်ခြင်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့လမ်း.
တက် – အယ်လ်ဘမ်
အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုသင်အများကြီးသင်ပေးနိုင်. နညျးလမျးမြားစှာခုနှစ်တွင်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးနှလုံးပါသတင်းစကားဖြန့်ဖို့အဆုံးစွန်ပလက်ဖောင်းင်, တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသင်ခန်းစာများကိုထပ်ဆင့်လွှင်, နှင့်တစ်ဦးအာခေါင်၌အသက်ဆင်နွှဲ, တစ်လက်ပုံစံကို. ဒါက Lee ကမိမိအစတုတ္ထအပြည့်အဝအရှည်အယ်လ်ဘမ်အပေါ်ဘာလုပ်တယ်ခရီးစဉ်အတိအကျဖွင့်, “ထလော့။”
သူ့သတင်းစကားကိုဖျောပွနိုင်ရန်အတွက်, ခရီးစဉ်တစ်ဝှမ်းဤအချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်ယူ. အဲဒီအစားမျိုးစုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူပူးပေါင်း၏, သူသည်မိမိအအတ္တလန်တာစတူဒီယိုမှာတစျခုလုံးကိုအယ်လ်ဘမ်များအတွက်သက်တမ်းကြာထုတ်လုပ်သူ Gawvi နှင့်အတူတစ်ခုတည်းကိုသာအလုပ်လုပ်ခဲ့.
တစ်ဦးက Black အပေါ်ပုံနှိပ်, 100% လက်စွပ်-ရက်ကြ၏ဝါဂွမ်းကို T-ရှပ်အင်္ကျီ.
ရှပ်အင်္ကျီအရွယ်အစား tag ကိုပုံနှိပ်စိတ်ကြိုက်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ tagless များမှာ.
ထုံးစံဓလေ့ 116 အောက်ခြေအနားအပေါ်ချုပ်ယက်တံဆိပ်.
တံဆိပ်၏နားလည်ဖတ်, 'ငါအရှက်ကွဲခြင်းမဟုတ် Am' '.
ဤရွေ့ကားရှပ်အင်္ကျီပါးလျဖြတ်ပြီ. သငျသညျပါးလျသောလျောက်ပတ်ကိုအပိုင်းပိုင်းကြိုက်ဘူးဆိုရငျ, ထို့နောက်တကအရွယ်အစားအထိအမိန့်မှအကြံပြုသည်.
အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ – စာအုပ်
ပိုကောင်းသလိုကား, ပိုကြီးတဲ့အိမ်သူအိမ်သား, whatever your heart desires. Everybody wants to live The Good Life. But what happens when dreams become nightmares and the promise of freedom leads toalife of imprisonment? သင်သည်အဘယ်သို့သောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရွှေရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါအဖြစ်ပျက်က၎င်း၏တောက်ပနေရှုံး? Maybe the rich and famous aren’t living The Good Life. Maybe our dreams are rooted in lies. ထိုအဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, ရုံဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျော့နည်းရှိသူတို့ကယ့်ကိုပိုရှိသည်. အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝကဘာလဲ…အမှန်?
ဤစာစောင်၌, မိမိအကောင်းချီးစတုတ္ထအယ်လ်ဘမ်ပြီးနောက်အမည်ရ, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ, ခရစ်ယာန်ရက်ပ်ပန်းချီဆရာနှင့်စာရေးဆရာ, ခရီးစဉ် Lee က, အဘယျသို့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထုတ်ဖော်ပြသ, ဇာတိပကတိနှင့်မာရ်နတ်သည်အဆုံးစွန်ဆုံးနဲ့စိတ်ကျေနပ်စရာဘဝအဖြစ်မြှင့်တင်ရန်. ထို့နောက်သူသည်အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝကယ့်ကိုအဘယျကရှင်းပြသည်: ဒီလောကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လှမ်းမမီအတွင်းနှင့်သေးဘာမှထက်ကျော်လွန်တဲ့ဘဝပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်. စိတ်ကူး: အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ. – နောကျတှဲရထား #1 – နောကျတှဲရထား #2
အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ – အယ်လ်ဘမ်
အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်သစ်အိပ်မက်များနှင့်အတူဖွင့်လှစ်, J.R featuring. နှင့် Sho Baraka, တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရည်မှန်းချက်လိုက်ဖမ်းဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအလုံးစုံတို့အဘို့အလိုရှိ၏အပေါများဘဝကနေကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်ကြောင်းအဖြစ်မှန်တစ်ခုနိုးထရာဖြစ်ပါသည်. ခရီးစဉ်အ Freeman နိုင်ငံတော်သီချင်းစက်ရုပ်နှင့်အတူအောက်ပါအတိုင်း ?? ငါ Lecrae featuring ကောင်းမွန်သောရယ်, လွှတ်ခြင်းအခွင့်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်သော, ခရစ်တော်၌တွေ့ရောငျ့ရဲနှင့်လုံခြုံရေး. Fantasy တွင် ??, Suzy ရော့ခ် featuring, ခရီးစဉ်ဂရုတစိုက်ကျနော်တို့အဘို့မှာနေထိုင်သို့မဟုတ်ရှည်လျားတစ်ခုခုကိုအိပ်မက်ကမ္ဘာတည်ပြီးနှင့်အိပ်မက်ဆိုးကဖြစ်ထွက်လှည့်ပါလိမ့်မယ်. KB နှင့်အတူအခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အန်ဒီ Mineo, ဂျင်မီ Needham, V ကို. နှင်းဆီနှင့်အခြားသော, စစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဆောင်၏အသကျလှပမှုကျင်းပ, သည်ကောင်းသောသူအပေါင်းတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်တှကေိုဖှငျ့ပွ. ညစ်ညမ်းသောဆန်မှနေချိန်တွင်ထုတ်လုပ်မှု, အဲလက်စ်မက်ဒီနာ, G-Styles နှင့်ယောသပ် Prielozny ခရစ်တော်အတွက်အသက်တာ၏စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုဘုန်းပွင့်နောက်ခံပေး.
က Man Up ကို
အဆိုပါက Man Up ကိုအယ်လ်ဘမ်, လူ Up ကိုရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် တွဲဖက်., လှုပ်ရှားမှုမှတေးသံရာပူဇော်သက္ကာအားဖြင့်ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ရှာတတ်၏! Lecrae, ခရီးစဉ် Lee က, Sho Baraka, Tedashii, Pro ကို, KB နဲ့အန်ဒီ Mineo တက်ခြင်းဖြစ်သည်စစ်မှန်တဲ့သမ္မာကျမ်းခွန်အားကြီးဖို့က Hip-hop ယဉ်ကျေးမှု၌အမျိုးသားများတောင်းဆိုနေကြပါတယ်: သတ္တိရှိရှိဦးဆောင်, လိုက်လျောညီထွေနေပယ်ချ, တာဝန်လက်ခံနှင့်နှိမျ့ခခြွငျးလိုက်ရှာ, ခရစ်တော်အတွက်နောင်တတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်.
နှစ်ဦး World အကြား
ခရီးစဉ် Lee ကမိမိကိုမိမိတစ်ဦးကိုမကြာခဏခက်ခဲအတွက်တွေ့, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာပြည်နယ်ကတိပေး–ထာဝရအသက်အဘို့အလတ်, သေးဒီတစ်ခုကတဆင့်သွားလာရန်တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်. သူ့ရဲ့တတိယအယ်လ်ဘမ်, နှစ်ဦး World အကြားယုံကြည်သူများအဖြစ်တရားနာအားလုံးအတှေ့အကွုံအပျော်စရာတွေနှင့်ရုန်းကန်မှုများကျွန်တော်တို့ echo ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်ဟပ်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုကမ်းလှမ်း. အဆိုပါဖွင့်ပွဲလမ်းကြောင်းခေါင်းစဉ်, ရီးရဲလ်ဘဝကဂီတ,?? ခရီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးစီမံကိန်းကိုမှမျှော်လင့်သောအရာကိုအကျဉ်း.
သငျသညျကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လုပ်ပါ? နောက်ကျောကဒုတိယ disc ကိုနှင့်အတူ, သငျသညျကျမ်းစာ၌ပါသောအာမှန်ဘီလူးမှတဆင့်ရှင်းလင်းစွာဘုရားသခင်ကိုမြင်ရဖို့အတှကျခရီးစဉ် Lee ကတစ်မစ်ရှင်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်, သင်တစ်ဦးပေးကမ်း 20/20 ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ. featuring မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်, မတူကွဲပြားထုတ်လုပ်မှု, Lecrae မှအချို့သော feature များနှင့်အတူ, Tedashii, ရှေးလင်နန်, နှင့်အခြားသူများ.
ခရီးစဉ် Lee ၏ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ်! ၏ဤလူငယ်နှင့် unashamed အဖွဲ့ဝင် 116 သိုက်အချို့သောအလေးအနက်အပူပေါ်ချ “သူတို့ကသာလျှင်သိလိုလျှင်”. သငျသညျဒီတစ်ခုအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ချင်ကြပါဘူး. Lee ကခရစ်တော်နှင့်အတူသင့်ရဲ့လမ်းလျှောက်အတွက်ရင်ဆိုင်ရကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စရပ်များကိုတစ်တစ်တန်အပေါ်ကိုထိခရီးစဉ်, ကျနော်တို့သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏ 2nd လူတစ်ဦးအပေါ်အချို့သောလေးနက်ဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကိုဆနျးစစျသငျ့တယျဘယ်လိုမှ. ခြောသငျသညျကိုချော့တခါ, ဒီ CD ကို Make နှင့်သီချင်းစာသားသို့တူး. သငျသညျအပေါ်ခရီးစဉ် Lee ကကြားဖူးတယ် 116 သိုက်ပေါင်းချုပ်အယ်လ်ဘမ်နှင့်ယခုသင်တိုနီကျောက်စာအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူသူ၏ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝအရှည်လွှတ်ပေးအပေါ်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ရနိုင်, JR, Lecrae, နှင့်ပိုပြီး, သံအမတ်ကြီးများကပေါင်းအချို့သောကြီးမြတ် features တွေ, Lecrae, Tedashii, မီးလျှံများနှင့်အခြားသူများကို!